कागतीका जात र तिनका जातीय गुणहरु - ज्ञानविज्ञान
कागतीको रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो । अपच एवं पेटको सबै जसो विकारहरु निष्काशन गर्न यो फल निकै उपयोगी मानिन्छ ।
पछिल्लो समय कागती खेती प्रति आम कृषकको आर्कषण बढ्दै जाँदा कुन कागती लगाउने भन्ने दुविधा रहेको पाईन्छ । यसका लागि फलफूल विज्ञ हरि सुवेदीले दिनुभएको जानकारी मूलक लेख ।
१. सुनकागती–१ (एन.सि.आर.पि–५५)
यो जात मोरङ जिल्लाका कृषकको बगैंचाबाट संकलन एवं जातीय छनौट गरिे व्यवसायिक खेतिको लागि हालै मात्र उन्मोचन गरिएको विकसित जात हो ।
यो जात तराई, भित्रि मधेस, मध्य–पहाडी क्षेत्रको बेशी÷खोच र तटिय क्षेत्रका पानी नजम्ने स्थानमा खेति गर्दा आषाढ देखि आश्विन सम्म मौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ भने केहि मात्रमा बर्षै भरी बेमौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ ।
मध्य–पहाडी भागमा यसको खेती गर्दा भाद्र देखि मार्ग सम्म मौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ भने केही मात्रमा बर्षै भरी बेमौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ ।
फलहरु गोला, चिल्ला, पातलो बोक्रा भएका, रसिला र बास्नादार हुन्छन् भने फलहरु पाकिसके पछि सुनौला रंगका हुन्छन् ।
एउटा फलको सरदर तौल ४० देखि ६० ग्राम सम्म हुन्छ ।
यसको फलमा रस ४९ प्रतिशत सम्म हुन्छ ।
रसमा अमिलोपन ७ देखि १० प्रतिशत सम्म हुन्छ ।
यसका कलमी बिरुवाहरुले रोपेको ३ देखि ४ वर्ष पछि व्यवसायिक उत्पादन दिन थाल्दछन् ।
पाकीसकेपछि फलको रङ हल्का पहेलो हुन्छ ।
यस जातको प्रति हेक्टर अधिकतम उत्पादकत्व ३४.५मे.टन सम्म छ ।
२ सुनकागती–२ (एन.सि.आर.पि–४९)
यो जात स्याङजा जिल्लाका कृषकको बगैंचाबाट संकलन एवं जातीय छनौट गरिे व्यवसायिक खेतिको लागि हालै मात्र उन्मोचन गरिएको विकसित जात हो ।
यो जात तराई, भित्रि मधेस, मध्य–पहाडको बेशी÷खोच र तटिय क्षेत्रका पानी नजम्ने स्थानमा खेति गर्दा आषाढ देखि आश्विन सम्म मौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ भने केही मात्रमा बर्षै भरी बेमौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ ।
मध्य पहाडी भागमा यसको खेति गर्दा भाद्र देखि मार्ग सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भने केही मात्रमा बर्षै भरी बेमौसमी फलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ ।
फलहरु गोला, चिल्ला, ज्यादै पातला बोक्रा भएका, रसिला र बास्नादार हुन्छन् भने फलहरु पाकिसके पछि सुनौला रंगका हुन्छन् ।
पाकिसके पछि फलको रङ हल्का पहेलो हुन्छ ।
यसको फलमा रस ४८ प्रतिशत सम्म र रसमा अमिलोपन ७ देखि १० प्रतिशत सम्म हुन्छ ।
यस जातको प्रति हेक्टर अधिकतम उत्पादकत्व २६.९ मे.टन सम्म छ ।
३. तेह्रथुम स्थानीय
यो जात तेह्रथुम जिल्लाको फाक्चामाराका कृषकको बगैंचाबाट छनौट गरिएको नेपालको स्थानीय जात हो ।
मध्य पहाडको ८०० देखि १२०० मिटर सम्म उचाई भएका स्थानहरु यसको व्यवसायीक खेती गरि गुणस्तरीय फल उत्पादनको लागि अति उपयुक्त हुन्छन् ।
तैपनि ८०० देखि १६०० मिटर सम्मको उचाईंमा पनि यसको खेती गरि उत्पादन लिन सकिन्छ ।
मध्य पहाडी भागमा यसको खेति गर्दा कार्तिक महिना देखि पैष महिना सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भने तराईमा पनि यसको उत्पादन लिन सकिने सम्भावना देखिएको छ ।
फल पाक्न थाले पछि फलको रङ हल्का पहेलो हुन्छ ।
एउटा फलको सरदर तौल ४० देखि ५० ग्राम सम्म ।
यसको रसमा अमिलोपन ७ देखि १० प्रतिशत सम्म हन्छ ।
सरदर ६५ वटा फल बाट १ लिटर सम्म रस निकाल्न सकिन्छ ।
मध्य पहाडी भागमा यसका कलमी बिरुवाहरुले रोपेको ३ देखि ४ वर्ष पछि व्यवसायिक फल उत्पादन दिन थाल्दछन् ।
४. पन्त–१ ९एन.सि.आर.पि.– ५३० (Large fruited lemon type)
यो भारतबाट आयातित प्रजाति हो ।
यो प्रजातिलाई तराई, भित्रिमधेस, मध्य पहाडको बेशी÷खोच र तटिय क्षेत्रका पानी नजम्ने स्थानमा खेति गर्दा जेष्ठ महिना देखि भाद्र महिना सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भने केही मात्रमा बर्षै भरी फल लिन सकिन्छ ।
मध्य पहाडी भागमा यसको खेति गर्दा श्रावण महिना देखि कार्तिक महिना सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भने केही मात्रमा बर्षै भरी फल लिन सकिन्छ ।
फलहरु ठुला, गोला, पाक्दा सुनौला रंगका, चिल्ला, पातला बोक्रा भएका र रसिला हुन्छन् ।
एउटा फलको सरदर तौल ९० देखि १२० ग्राम सम्म हुन्छ ।
फलमा रस ४४ प्रतिशत र रसमा अमिलोपन ६.४ देखि ६.५ प्रतिशत सम्म हुन्छ ।
यो प्रजाती औद्योगिक प्रयोजनको लागि अति उपयोगी छ ।
यस प्रजातीको प्रति हेक्टर अधिकतम उत्पादकत्व ३०.९ मे.टन सम्म छ ।
यति मात्रै गर्न सके निचोरेर फालेका कागतीकाे खोस्टाका यस्ता अनौठा फाईदा हुन्छन्
Up Next किन मृत्युदर बढि हुन्छ साना चल्लामा ? कृषकले जान्नै पर्ने कुरा